मनोरन्जन Archives | Page 42 of 45 | Daily State News
निश्चल र स्वस्तिमाको ‘कुटुमा कुटु’
भदौ २३ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’मा समावेश ‘कुटुमा कुटु’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । असिम शाहको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रको लोक लयमा आधारित गीतमा निर्देशक निश्चल बस्नेत र नायिका स्वस्तिमा खड्काले नृत्य गरेका छन् । निश्चल र स्वस्तिमालाई दर्शकले पहिलो पटक पर्दामा देख्न पाएका हुन् । ए जी टु […]
काठमाण्डौँका मेयरलाई जितुको शुभकामना
काठमाण्डौँका मेयरमा नेकपा (एमाले) का बिद्यासुन्दर शाक्य बिजयी भएसँगै उनलाई शुभकामना अाईरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि शाक्यलाई शुभकामनाको ओईरो लागेको छ । यस्तैमा हाँस्यकलाकार तथा नायक जितु नेपालले पनि शाक्यलाई शुभकामना दिएका छन् । जितुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत काठमाण्डौँ महानगरपालिकाको मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यलाई शुभकामना दिएका हुन् । उनले शुभकामना दिदैँ मेयरले […]
“छक्कापन्जा २” छायांकनको एक महिनामा दीपकले लेखे यस्तो स्टाटस
२०७३ को सुपरहिट चलचित्र ‘छक्कापन्जा’ सिक्वेलको रुपमा बनिरहेको चलचित्र ‘छक्कापन्जा २’ को छायांकन सुरु भएको आज एक महिना पुगेको छ । चलचित्रका नायक तथा निर्माता दीपकराज गिरीले आफ्नो फेसबुकमार्फत आईतबार बिहानै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । आफ्नो र नायिका प्रियंका कार्कीको एक तस्विर सार्वजनिक गर्दै उनले फिल्म रेकर्ड तोड्न नभई मन जोड्न आउने समेत उल्लेख […]
गितकार रोजी लाबुङ (राई ) संगको संगीतीक अन्तरर्बाता हामी यहाँ हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौं नेपाली गीतसंगीत मा बिभित किसीमको गीत लेख्न सक्ने मा एक नारीसाक्क्षर रोजी लाबुङ (राई ) पनि पर्दछीन् ।
south korea : Hang chemjong उनको गीतहरु सुनेर उनको कथा कबिताहरु पढेर पनि यकिन गर्न सकिन्छ कि उनी गीत लेखन र साहित्यमा उनी एक सफल ब्यक्ती हुन् तर उनको लेखाईमा जति उनी सक्षम छिन् तर त्यति नै उनी ओझेलमा परीरहेकी छिन भन्दा फरक नपर्ला कारण मैले जाने बुझे अनुसार उनी मिडीयाहरु मा प्रचार प्रसार मा […]
स्तनलाई भोगटे भनेपछि के भनिन् ऋचा शर्माले ?
चरित्र अभिनेत्रीको रुपमा आफुलाई स्थापित गरिसकेकी नायिका हुन् ऋचा शर्मा । चलचित्र ‘फस्ट लभ’ मार्फत नेपाली सिने उद्योगमा प्रवेश गरेकी यि नायिका अचेल फिल्म भन्दा पनि बिभिन्न कार्यक्रम तथा सभा समारोहरुमा ब्यस्त छिन् । पछिल्लो समय उनी रंगपत्रकार तथा निर्देशक डब्बु क्षेत्रीको कथा संग्रह ‘नमस्ते काठमाण्डौँ’को लोकार्पणमा उपस्थिीत भएकी थिईन् । उनी त्यहाँको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा […]
‘पर्व’ले जगायो, जेबिकाको आश
चलचित्र क्षेत्रमा स्टार बन्ने सपनाका साथ प्रवेश गर्ने कलाकार सयौँ छन् । चलचित्रमा डेब्यु गर्दै गर्दा अधिकाँस नायक नायिकाले स्टार बन्ने सपना देख्छन् । त्यो सपना पुरा गर्नकै लागि चलचित्र क्षेत्रमा संघर्ष गर्छन् । ती मध्ये केहि मात्र दर्शकका प्रिय बन्छन् । लोकप्रियता कमाएर चलचित्र क्षेत्रको नक्षत्र बन्न सफल हुन्छन् । तर, जेबिका कार्की यो […]
हास्य कलाकार विल्सन विक्रम राई (तक्मे बुढा)ले राष्ट्रपतिको हातबाट प्रवल जनसेवाश्री पदक पाएका छन् । गएको वर्ष बजेट भाषणका क्रममा सरकारले गरेको निर्णय अनुसार उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रवल जनसेवाश्री पदक दिएकी हुन् । बजेट भाषण कार्यक्रममा, सुप्रवल जनसेवाश्री ८३ जनालाई, प्रवल जनसेवाश्री १३५ जनालाई र जनसेवाश्री मानपदवी ५१ जनालाई दिईने घोषणा भएको थियो । […]
छविलाई साम्राज्ञीको आश, तर नायिकाले पार्दैछिन् निराश
नायिका शिल्पा पोख्रेल चलचित्रमा हुँदा हुँदै निर्माता छविराज ओझाले नायिका साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहलाई ‘मंगलम’ नामक चलचित्रमा भित्राए । चलचित्रमा उनको भूमिका कस्तो छ भन्ने खुलाइएको छैन । तर, साम्राज्ञीको बढ्दो लोकप्रियतालाई देखेर नै छविले यसो गरेका हुन् भन्ने वुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर, नायिका साम्राज्ञी भने छविराज ओझाको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र ‘मंगलम’लाई आफ्नो सूचीमा […]
सुन्दर रीमाको व्यस्तता केमा ?
नायिका रीमा विश्वकर्मालाई दर्शकले पछिल्लो समयमा चलचित्रको पर्दामा खासै देख्न पाएका छैनन् । उनी, अहिले टेलिभिजनको पर्दामा भने देखिन्छिन् । टेलिभिजन शोमा भीजेकोे रुपमा देखिदै आएकी रीमा म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गरिरहेकी छिन् । रीमाको चलचित्रमा व्यस्तता कम भएको छ । उनै रीमा काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा हट पहिरनमा पुगेकी थिइन् । सो पहिरनमा रीमा […]
विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनमा अष्ट्रेलियामा कडाई, नेपाली फिल्मको बजार गुम्ने खतरा
बिदेशी चलचित्रहरूको प्रदर्शनीमा अष्ट्रेलियन सरकारले कडाई गर्ने भएपछी त्यो मारमा नेपाली चलचित्रहरू पनि पर्ने भएका छन । अष्ट्रेलियन सरकारको बर्गिकरण बोर्डको कारण यस्तो समस्या आउन लागेको हो । यस कारण पनि पहिले जस्तो नेपाली चलचित्रलाई अष्ट्रेलियामा ल्याउने मामिलामा चलचित्र बितरकहरू पछि हट्न थालेका छन । अब देखि कुनै पनि सिनेमा चार शो भन्दा बढी देखाउन […]
तपाइले चलचित्रको पर्दामा होस् या सार्वजनिक कार्यक्रममा नै किन नहोस्, नायिका नम्रता श्रेष्ठलाई बोल्ड अवतारमा देख्नुहुन्न । अभिनय गरेर अवार्ड नै अवार्ड जितेकी नम्रता कुनै कार्यक्रम वा चलचित्रको पर्दामा बोल्ड हुन चाहन्न् । तर, वुधबार आयोजना भएको उनी अभिनित चलचित्र ‘पर्व’को प्रिमियरमा भने उनी केही खुल्ने कोशिश गरिन् । नम्रताले लगाएको पहिरन लामो थियो । […]